Ny fanamby amin'ny fitsangatsanganana any Mekah | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Fitsangatsanganana any Azia
Samy efa nandre izany isika rehetra Meka, "Ny dia mankany Mekka", "dia toy ny fandehanana any Mekka" sy andian-teny toy izany, saingy angamba vitsy dia vitsy amintsika no efa nihaona tamin'ny olona iray izay nandeha tany.
Ary izany tokoa Ho an'ny Silamo irery ihany i Mekah ka raha tsy Silamo ny fivavahanao dia tsy ho afaka hamadika ilay andianteny ho marina ianao. Mamonjy ny halavirana, ny dia mankany Mekka dia karazana Camino de Santiago, fivahinianana masina tsy manam-paharoa, tsy azo tononina ary tsy hay hadinoina ka andao hojerentsika izay momba azy.
2 Tsidiho i meka
3 Fivahinianana masina sy vahoaka marobe
Amin'ny fitsipika dia tokony ho fantatrao fa a tanàna izay any Arabia Saodita. Ity firenena ity dia mitana ny ampahany lehibe amin'ny saikinosy Arabo ary mifanila amin'i Jordania, Emira Arabo Mitambatra, Qatar, Bahrain. Yemen, Oman ary ny Ranomasina Mena.
Amin'ny fananana tanàna roa tena lehibe ho an'ny Silamo tany masina io. Meka no resahiko fa i Medina ihany koa. Hatramin'ny nahitana solika tamin'ny taona 30 tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia niova ny firenena ary fantatrao tsara fa ny faritra ankehitriny dia manan-danja lehibe amin'ny fomba fiainantsika andrefana sy kapitalista.
I Mekeka no tanàna masina indrindra amin'ny finoana Silamo ary noho izany antony izany Izay tsy mampihatra an'io fivavahana io dia voarara tsy hiditra. Etsy ankilany Ny silamo tsirairay dia tsy maintsy, na dia indray mandeha amin'ny fiainany aza, manao ny fivahinianana masina any La Mecque.
Antsoina ity dia ity Hajj ary io dia iray amin'ireo Pilar dimy an'ny Silamo. Ny olon-dehibe silamo rehetra dia tokony hanao izany, na lahy izy na vavy, raha manam-bola hanaovana ilay dia izy ary avelan'ny fahasalamany. Ny fianakaviana sahirana dia tsy afaka mividy izany foana ka vola no ampiasana vola ka na ny mpikambana iray aza dia afaka manao ny dia.
El Hajj raha tsy amin'ny volana an'ny Dhu ho an'ny-Hijjah koa misy olona an'arivony sy maro manao ny fivahinianana masina. Mihoatra ny miliara sy tarehimarika sasany miresaka momba ny fivezivezen'ny olona roa tapitrisa mankany Saudi Arabia amin'io daty io.
Ny fitsangatsanganana dia misy hatrany ny fitsidihan'ny Moskea Masina, Kaaba, Mina, Hill of Arafat ary Jabal Rahma, Muzdalifah, Jabal Al Thur, Jabal Al Noor, Masdij e Taneem, Hudaibiyah, Ja'aronah ary Jannat ui Mualla. Ireo dia tranonkala heverina ho masina satria nandalo i Muhammad, nanome ny toriteniny farany, nalevina ny namany, teo amin'izay nandehanany, sns.
Raha atao amin'ny iray volana ity fivahinianana masina ity dia fantatra amin'ny anarana hafa: Umrah. Masina i Meka satria io no toerana nanambarana voalohany ny Tenin'Andriamanitra tamin'ny Mpaminany Muhammad..
Ny Kaaba sy ny manodidina azy dia mirakitra tantara very tamin'ny fiandohan'ny fotoana. Ohatra, misy ny tantara fa nalevina tao Mekka i Adama na ny rain'i Abrham, Ibrahim, dia nanamboatra azy niaraka tamin'i Ishmael zanany lahy.
Tsidiho i meka
Omena visa manokana ho an'ny fivahinianana masina ka ny silamo eto amin'izao tontolo izao dia tokony hanatona ireo masoivoho ary hanodina azy ireo. Izy io dia be dia be ny antontan-taratasy ary fampahalalana tena henjana no angatahina amin'ny mpandeha. Etsy ankilany, ny vehivavy silamo dia tsy maintsy manao ny dia eny na eny amin'ny lehilahy izay miaro azy raha tsy 45 taona na mihoatra izy ireo ary mivezivezy amin'ny vondrona iray ary mahazo alalana avy amin'ny vadiny.
Ny firenena tsirairay dia omena visa manokana isan-karazany. Ity isa ity dia mihevitra ny isan'ny Silamo monina ao amin'io firenena io ary mazava ho azy koa dia miankina amin'ny isan'ny mpandeha mangataka izany mandritra ny volana maro. Ny hevitra dia tsy misy olona an-tapitrisany loatra satria mety korontana izany.
Afaka mandeha ve ny olona iray tsy teraka Silamo? Tsia mihitsy. ny ny tsy silamo dia tokony hijanona 15 kilometatra miala an'i Meka sy Medina. Raha hita ny olona tsy mpino akaiky kokoa, dia mety hiharan'ny sazy henjana izy.
Raha mitsidika ireo toerana masina dia tokony ho Silamo ianao, teraka na niova fo. Fa raha tranga faharoa io dia tsy maintsy hazavaina amin'ny fangatahana visa izany ary alalana avy amin'ny ivon-toerana Silamo izay niditra an-tsehatra tamin'ny fiofanana silamo ary tokony aseho ny taratasy fanamarinana momba ny fiovam-po.
Avy hatrany, Ahoana no ahatongavanao any Mekka? Ny fomba haingana indrindra dia amin'ny fiaramanidina mankany Jedahh. Ity tanàna ity dia manana seranam-piaramanidina iraisampirenena izay tsy ampiasaina afa-tsy amin'ny fivahiniana masina na fivahiniana masina any La Mecque. izany eo amoron'ny Ranomasina Mena, eo andrefan'ny firenena, ary azy ny azy tanàna faharoa miaraka amin'ny ankamaroan'ny mponina.
avy amin'ny Jeddah la Mecca na Medina dia ora vitsivitsy sisa. Afaka mankany ianao amin'ny alàlan'ny fiara, amin'ny làlambe, amin'ny fiara na bus. Ny orinasam-pitaterana bus dia SAPTCO fa hahita bisy karazana charter marobe koa ianao.
Any Jeddah dia misy fantsona roa, ny iray mifangaro ary ny iray ho an'ny Silamo ihany, ny Haram al Sharif. Amin'ny fotoana iray manamorona ny zotra dia misy ny tobin'ny polisy ary ao ireo tsy Silamo. Ny olona, ​​raha fintinina, dia mivezivezy amin'ny fiara, bus ary van kely Tsy lafo izy ireo ary manana famantarana amin'ny Arabo sy Anglisy ianao.
Hatramin'ny taona 2010, ny metro dia niasa tamina tsipika maoderina dimy ary eo am-panatanterahana ny asa mba hampifandraisana ny rafitra amin'ireo toerana masina rehetra, koa angamba amin'ny ho avy dia ho mora kokoa sy haingana kokoa ny manodidina azy io.
Azo zahana amin'ny lalan-tany samihafa koa izy io. Ohatra, avy any Damasy mankamin'ny moron'ny Ranomasina Mena. Ny tanàna Saodiana akaiky indrindra dia i Tabuk ary eo amin'ny sisin-tany dia mitandrina tsara ny polisy satria tsy tian'izy ireo ny vahiny tonga mitady asa sy mandainga miaraka amin'ny fialan-tsasatry ny fivahinianana masina.
Araka izany, tsy maintsy manolotra tapakila mandroso sy vola ianao. Mila mandoa vola amin'ny agents manokana aza ianao, antsoina mutawwif, izay mikarakara ny fampiantranoana, ny fitaterana, ny mpitari-dalana ary ny fanampiana hafa any Mekah.
avy amin'ny Tabuk afaka manohy ny dia mankany Medina ny olona, ilay tanàna izay notsidihin'ny Mpaminany Muhammad avy tany Mekà tamin'ny 622 taorian'ny nandavana ny asany. Teo no napetraka ny fototry ny silamo ary eo no izy ao ny fasan'i Muhammad. Raha tanànan'i Muhammad i Medina, tanànan'i Allah i Meka.
Voafehy tsara ny fidirana ao Medina satria amin'ny maha toerana masina azy dia tsy afaka miditra ireo tsy mpino. Betsaka ny fanaraha-maso matetika. Aorian'ny fitsidihana tsy maintsy atao dia matetika ny mpivahiny dia mandeha taxi lavitra mba hahatongavany any Mekka, hiampita ny tany efitra.
Any Meka dia misy hotely maro, amin'ny karazany rehetra, na dia ny Hilton aza, ka samy hafa ny vidiny. Arakaraka ny hanatonan'ny trano fandraisam-bahiny ny Mosquète Holy, dia avo kokoa ny vidiny. Misy aza ireo tena mirentirenty miaraka amin'ny fahitana ny tanàna, fa alao an-tsaina ny vidiny.
Fivahinianana masina sy vahoaka marobe
Betsaka amintsika no nihalehibe tamin'ireo sary ireo tao anaty vaovao: adin'omby sy ny vahoaka marobe maty tany Mekka. Ary marina izany, isaky ny matetika no mitranga. Alao an-tsaina ny olona roa na telo tapitrisa miaraka ...
Na firy na firy ny fanaraha-maso misy, dia sarotra ny misoroka stampede ka rehefa mandeha ny fotoana dia nisy fahafatesan'olona an-jatony maro, na ny manodidina ny Kaaba, ny goba mainty malaza, ary teny an-dalana, teo amin'ireo tetezana taloha sy vaovao.
Olona an-tapitrisany no mifindra amin'ny toerana masina mankany amin'ny iray hafa, toy ny onjan-dranomasina matevina izay miainga avy any Muzdalifah mankany Mina, telo kilometatra miala eo, mba hahitana ny toerana nanalam-baraka an'i satana. Indraindray ny onja dia mikoriana, indraindray kosa mikatona ... toy ny fiainana mihitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Ny fanambin'ny dia mankany Mekka
Zavatra hita sy atao ao amin'ny Riviera Maya